रमाईलोमै बित्छ क्वारेन्टिनको समय | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २९ असार २०७७, सोमबार ११:१०
दराैँदी समाचारदाताः शनिवार बिहान नौ बजे गोरखा नगरपालिकाले वडा नम्बर १० को मनकामना बहिरा माध्यमिक विद्यालयम सञ्चालन गरेको क्वारेन्टिनमा पुग्दा त्यहाँ बस्ने १७ जना लोकदोहोरी गीतको तालमा छमछमी नाच्दै थिए । उफरमा लोकदोहोरी गित घन्काउँदै नाच्दै गरेका उनीहरुलाई बेलाबेला नेपाली सेनाका टोलीले शारीरिक ब्यायम पनि सिकाउँथे । माथिल्लो आँगनमा बसेका स्वास्थ्यकर्मी र सेनाको निर्देशन अनुसार उनीहरुले शारीरिक व्यायम गरिरहेका थिए ।
बिहान करिब दुई घण्टा यो क्रम निरन्तर चलिरहने स्वास्थ्यकर्मी ज्योति श्रेष्ठले बताईन् । ‘छिनछिनमा हामीले केही समस्या भए भन्नुहोस् भनेर सोधिरहेका हुन्छौँ’ उनले भनिन् । मुख्य नाका मझुवा देउराली भएर जिल्ला भित्रनेहरु धेरै हुँदा मनकामना बहिरा माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बस्नेहरु धेरै छन् ।
अहिलेसम्म एक सय ३६ जना त्यहाँ बसिसकेका छन् । उनीहरुमध्य १० जना मात्र कोरोनाका कारण संक्रमित भए । त्यहाँ बसेकाहरुलाई दुई पटक पिसिआर गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर पठाईन्छ । ‘एक सय १७ पुरुष र १९ जना महिला यहाँ बसिसक्नुभयो’ क्वारेन्टिमा खटिएकी स्वास्थ्यकर्मी ज्योती श्रेष्ठले भनिन् ‘अहिले १७ जना बाँकी हुनुहुन्छ ।’ बसेकाहरुमध्ये अधिकासं बिदेशबाट आउनेहरु छन् । भारतबाट ४९ जना, तेस्रो मुलकबाट २० जना र ६७ जना नेपाल भित्रकै जिल्लाबाट क्वारेन्टिन बसेका थिए ।
त्यहाँ रहेकालाई बिहान ब्यायम गराउने, खाजा, खाना दिने गरिन्छ । दिनभरि र साँझपनि क्वारेन्टिनमा बसेकाहरु इन्टरनेट चलाएर समय बिताउँछन् । रोजगारीको सिलसिलामा बिदेश गएका र कोरोनाको प्रभावले रोजगारी गुमाएकाहरु घर फर्किएका छन् । उनीहरु १४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेर पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै घर फर्किन्छन् । क्वारेन्टिन ब्यवस्थापन राम्रो हुँदा नेपाल फर्किसकेकाहरुले इन्टरनेटबाट कुराकानी गरेर सँगै काम बिहिन भएर बिदेश बसेकालाई पनि बोलाउन थालेको क्वारेन्टिन ब्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारी बताउँछन् ।
क्वारेन्टिन ब्यवस्थापनका लागि प्रदेश र संघिय सरकार कतैबाट रकम निकासा नहुँदा नगरपालिकाले आफैँ ब्यवस्थापन गरेको गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजनराज पन्तले बताए ।
‘स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको सहायताले क्वारेन्टिन धेरै ब्यवस्थित बनाएका छौँ’ उनले भने ‘क्वारेन्टिनमा बस्दा तनाब नहोस् र समुदायले बिदेशबाट फर्केकाहरुलाई नराम्रो दृष्टिकोणले नहेरुन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो हो ।’ क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुलाई सम्झाउँदै उनले भने ‘बिदेशबाट फर्कनुभएकाहरु अब गाउँमै काम गर्ने योजना बनाउनुहोस् । बिदेशबाट फर्केकालाई गोरखा नगरपालिकाले कृषि, पशुपालन ब्यवशायमा प्रोत्साहन गर्नेछ ।’ क्वारेन्टिनमा बसेर फर्केकाहरुलाई कोरोना बारे सचेत भएर गाउँमा समेत सचेतना गराउन उनले सुझाब दिए ।
गोरखाका केही पालिकाका क्वारेन्टिन अहिले पनि आधारभुत सामग्री बिनाका छन् । इन्टरनेट सबैठाउँमा छैनन् । गोरखा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टिनबाट घर गएकाहरु पनि त्यहाँको ब्यवस्थापन र ब्यवाहार राम्रो भएको बताउँछन् ।